Tappan Lake Dredging Project, fandalinana tranga iray amin'ny famerenana amin'ny farihy
Manomboka miaraka amin'ny Ellicott Brand® 370 Dragon Dredge ny Tappan Lake Dredging
Septambra 21, 2015
HARRISON COUNTY, OH (Etazonia) - Ny fanondrahana ny faritra sasany ao amin'ny farihin'i Tappan dia nanomboka tamin'ny farany ny fitaovana ary teo amin'ny rano, hoy i Barbara Bennett, talen'ny serivisy fitantanana ho an'ny Distrikan'ny Muskingum Watershed Conservancy (MWCD).
Ny raharaha dia noresahina tamin'ny fihaonana isam-bolana tamin'ny zoma lasa teo, izay natao tao amin'ny Charles Mill Lake Park tao Mansfield.
Bennett dia nilaza fa ny 400,000 metatra toradroa dia esorina amin'ny faran'ny Tappan, izay hitranga eo akaikin'ny Bay Beaverdam Run, Clear Fork Bay ary miaraka amin'ny andaniny roa amin'ny Deersville Road.
Ny valizy dia hivezivezy amin'ny alàlan'ny fantsom-pifamoivoizana mora, izay hihanika eo ambanin'ny US 250 mankany amin'ny tranokala iray izay fananan'ny MWCD, izay eo amin'ny zoro avaratra andrefan'i Addy Road sy Etazonia 250, hoy i Bennett.
Ilay milina manga sy fotsy lehibe misy fampangaroana volomboasary dia nomena ny anarana hoe "CADIZ," hoy izy ary nanampy fa napetraka tao amin'ny fananana Addy ny famonosam-baravarana.
"Ny rafi-pitondrana dia amin'ny alàlan'ny mekanika sy ny toeran'ny rafi-kanto," hoy i Bennett tamin'ny mailaka. Nilaza izy fa ny fampiasana ny pumping dia hampihenana ny fifamoivoizana kamiao, izay mazàna hampiasaina amin'ny fanesorana ny menaka. Ny rafi-pitaterana, izay efa noresahina tamin'ny fivoriana MWCD teo aloha, dia rafitra iray, izay manafaingana ny menaka haingana kokoa, ahafahan'ny mpamaky ny fitaovana hampiasana azy haingana kokoa noho ny mahazatra.
"Miresaka hatrany izahay amin'ny Harrison County ary koa… ODNR (Departemantan'ny harena voajanahary ao Ohio)," hoy i Bennett. "Tsy nisy naharitra) fa hanana fitaovana misy 400,000 cubic mihoatra ny misy azy izahay ka misy fitaovana tsara omena hamenoana na hampiasana azy any ho any."
Ny kaomisera Harrison County, Don Bethel, dia nanambara fa mbola nifanakalo hevitra momba ny MWCD izy ireo ary tena nahaliana azy ireo ny nahita ny fampitahorana nesorina avy tao amin'ny farihy.
Nilaza i Betela tamin'ny fivoriana teo aloha teo am-piandohan'ny taona teo fa ny hevitra iray hahazoana ny fampidirana dia ho ampiasaina amin'ny famenoana ireo lohasaha kely tsy lavitra ny Industrial Park Road. Ny hevitra dia ny hanorenam-bola bebe kokoa mba hahafahan'ny faritra ho tsara tarehy kokoa amin'ireo mpandraharaha ho tonga orinasa, izay efa nanomboka nitsimoka teo.
Atombohy amin'ny Ellicott ny tetikasan'ny fanondranana ny farihinanao